YEYINTNGE(CANADA): လိုနေတာက အကြီးစား ပြည်တွင်းစစ်
တတ်လည်းတတ်နိုင်တဲ့ စာရေးစာရာပါလား ...ရှင်လာပြီးဦးဆောင်ပါလား ပြည်တွင်.စစ်ကြီးကို...
နည်းမျိုးစုံနဲ.စစ်ခွေးတွေကိုဆော်ကြ။ စုပေါင်းချလို.ရှိရင် စစ်ခွေးတွေ လူစုကိုမိသွားမယ်။ တစ်ဦးချင်းတာ
၀န်ယူပြီး စစ်ခွေးတွေရဲ. မိသားစု အားလုံး အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ကြံ.ဖွတ်တွေ ထဲ စိမ့်ဝင်ပါ။ နောက်ရအောင်ဖျက်စီးပါ။ သူတို.ဘယ်သူကို ယုံရမလဲမသိနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ကောင်းတာက သူတို. စစ်ခွေးရဲ.ကျွန်တွေ ကို ရအောင်ဖျက်စီးပါ။ သတ်နိုင်ရင် သတ်ပါ။